UArtemis kunye nomfanekiso oshukumisayo womfazi kwilogo ye-NASA | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-NASA entsha yeLogo ibhiyozela ukuThunyelwa kwabafazi kwiNyanga
UManuel Ramirez | | Ukuphefumlelwa, ILogos
Amaxesha ayatshintsha kwaye namandla ababhinqileyo ayavela ngawo onke amandla anokubakho ukuze ngoku i-NASA ibandakanyeke njenge-protagonist kwilogo yayo entsha. Yiyo loo nto ebhiyozela ukuthunyelwa komfazi wokuqala enyangeni.
I-NASA siyazi ukuthanda kwakhe iilogo ekumgangatho ophezulu kuyilo kwaye kwilogo yemishini uArtemis usebenzise umfanekiso ovusa inkanuko wabafazi. I-logo kuyilo olungaphezulu kokungaqhelekanga kwaye loo magqabi aprinte intsingiselo enkulu enamaxesha ekuye kwafuneka siphile ngawo.
Kukho intsingiselo ekhethekileyo kwigama lenkqubo ka-Artemis. Kwimishini yokuqala yenyanga, u-Apollo, eli gama lalisetyenziswa kwizithixo zamaGrike. Y UArtemis ngudade wamawele ka-Apollo njengothixokazi wenyanga.
Kwaye inkulu ngakumbi Intsingiselo yokuthunywa okutsha apho iNASA unenjongo yokuthumela bobabini indoda nomfazi enyangeni. Ude wabonisa indawo yokuma emajukujukwini apho sinokubona oosomajukujuku ababini, abesilisa nabasetyhini, bevavanya ukulunga kunye nezibonelelo zabo.
UArtemis unomsebenzi wokuhambisa yonke imizamo yeNASA kunye nelizwe laseMelika ukubuyela enyangeni kwaye umfazi aphathe isibane esikhanyayo. Kwaye iyakuba yile thotshi evula indlela eya kwi-mission elandelayo, eya kuthi ibe sisijikelezi-langa uMars; eneneni unolu ngcelele lweeposta ezenziwe yiNASA kwiminyaka embalwa edlulileyo ngeMars njengomboniso kunye nenjongo.
Un Ilogo yeArtemis apho kuboniswe izibane nezithunzi yenyanga ekrelekrele enomfanekiso womfazi ngendlela evusayo. Umzekelo oza kuwulandela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » I-NASA entsha yeLogo ibhiyozela ukuThunyelwa kwabafazi kwiNyanga
I-Adobe ibhengeza ukudityaniswa ngokuthe ngqo kwiMicrosoft Word kunye nePowerPoint
I-logo entsha yee-Olimpiki ezingama-2024 eParis embindini wentlekisa